Bluetooth Ebube Self adịzi Scooters - Jomo Technology Co., Ltd
Bluetooth Ebube Self adịzi Scooters
Ọ bụ ezie na, otu n'ime ihe ndị magburu onwe ụzọ bụ ịzụta site na ezi na n'ụzọ kwesịrị ekwesị-reputed ere ákwà na-ya ghara ịdị irè atụmanya ọ bụla dị otú ahụ omume. Otú a ị ga na-ida gị obibia na-adịghị na-echegbu onwe a ọtụtụ na ekele na oncoming okporo ụzọ. The 2 wheel adịzi Scoote r site Powerboard`s ndụ batrị ziri ezi, na ị ga-euphoric na a unit mgbe niile dị ka omume ọma. Ị nwere ike ịga maka skuuta nke nwere batrị egosi na ọ na-ahụ larịị nke ike nke batrị. Lee Ada mkpa oche nkwagharị, Agagharị Ọrịa Aids, na ndị ọzọ Energy-Kewapụrụ Agagharị Ngwa nke i nwere ike ịgụ ebe a. N'ihi ya, mụta na 8.5inch Smart Balance skuuta Bluetooth hoverboard nnukwu wheel K7 nnyocha ebe a tupu ịzụ ya. Ebe a bụ a mma ntule video na achikota a ọnụ ọgụgụ nke a. On Hover ke mbiet, anyị na-ejikọta gị na na soplaya mgbe gị na-amụta na nnyocha anyị weere na ọ ga-jikọọ na ị na na ụlọọrụ n'ime US
I kwesịrị nanị chọrọ ka ojiji nke skuuta maka ntụrụndụ pụrụ iche onwe adịzi hoverboard ga ukwuu karịa ezuru. Ọzọkwa, scooters niile teren, na ị ga-ahu nagide ha na apịtị, snow, n'okporo ámá na-ájá-ebupụta. Na mbụ, onwe adịzi hoverboard k7 bụ 8.5inch nnukwu wiil na anya-ụzọ nke kwesịrị ekwesị maka beach ịnya. N'ihi ya, ọ dị mma ịnya ahụmahụ. Nke abuo, 500W Motors, ike ike. Thirdly, sọrọ usoro motherboard, melite arụmọrụ nke mmepụta na mgbe-ahịa. E wezụga, ọ bụ onwe mode na nanị ọdịdị patent, ihe pụrụ iche. Otú o sina dị, otu kwalitere ọrụ aka na aka na omeiwu na a nzube legalize ha were. I kwesịrị ịzụta otu? Ya mere, tupu ị na-azụta a hoverboard hụ na ya batrị irè na-echebe ma na-abịa na a ikenyeneke mbiet management na odori unit. Ọ bụ na ọ gafere Ul2272 ichere?
The Powerboard site Hoverboard pụrụ ịbụ eleghị anya ndị kasị oké ọnụ onwe-guzozie scooters si n'ebe na ajụjụ ọ bụla nke si ajụ bụ: "Ọ bụ na ọ ego uru? The Koowheel onwe guzozie skuuta price bụ nnọọ ihe ezi uche .N'eziokwu, Koowheel adịghị eme ka ala àgwà ngwaahịa maka ahịa na nchekwa. Ọ bụ ihe magburu onwe nhọrọ ma ọ bụrụ na a ga-abụ na ụmụaka na-agba ya. The Self-adịzi skuuta K8 site KOOWHEEL nwere ike ịbụ nnọọ mfe iji, na ị dị nnọọ mkpa inwe obi ike na ị ga-enwe ike ịnọgide na-ihe ebe n'elu a na osisi. atụmatụ:
Hoverboard K8 e mere na Milan, ọ bụ na mbụ EU ahịa ahaziri
Zoro Ezo emefu imewe, mfe ebu
Off ụzọ wheel imewe, mfe enwetaghị anya n'etiti nkezi ụdị
Gịrịgịrị na ìhè ibu
Green edoghi na pedal
Gịnị uru o nwere?
Koowheel adịghị eme ka ala àgwà ngwaahịa
Hoverboard K8 anọgide na Top quality ọkọlọtọ
Jiri naanị Top suppliers maka PCB, Motor, chaja
The kasị pụrụ ịdabere na 24V 6.5inch hoverboard
Battery osobo niile nchekwa ụkpụrụ
Kasị ala ntụpọ ọnụego
Ya mere, nke a onwe adịzi skuuta nwere otu nke kasị mma nche atụmatụ maka agba. Wee tinye otu ụkwụ na swegway. N'ihi na ndị na-achọ ihe ọma, ha na njikere iji kwụọ uru, mgbe nke a bụ gị nhọrọ kasị mma.
Post oge: Aug-29-2017